Seenaa Gabaabaa Enginer Bantii Guddataa – Oromedia
Home » Seenaa » Seenaa Gabaabaa Enginer Bantii Guddataa
Enginer Bantii Guddataa abbaasaa obbo Guddataa Hirphaa fi haadhasaa adde Umee Hinsrmuu irraa 1958 ALA naannoo Magaalaa Siree ganda Qotee bulaa Jaarsoo Daallasii jedhamutti dhalate.
Enginer Bantiin akkauma ijoollee baadiyyaa kamuuu mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Sireetti mana warrasaatii miilaan marmaaree hammma kutaa saddetiitti barate.
Ministirii yeroo sana kutaa saddetitti kenamu qabxii olaanaa fiduun gara magaalaa guddittii Wllaggaa Naqqamteetti darbee comprehnsive Naqqamtee otoo barataa jiruu abbaansaa obbo Guddataan Du’aan boqotani.
Bantiin gadda guddaa maatiitti seeneen obbolaasaa xixiqqoo turan haadhasaatti dhiisee barachuu hin dandeenye obbolaasaa guddisuuf itti gaafatama guddaatu irra bu’e.haata’uutii otoo qotee haadhasaa gargaaraa jiruu Hiriyootasaa barnoota saanii itti fufanii jiran irraa dabtara ergifataa otoo qayyabatuu kutaa 12ffaa seene
wanti ajaa’iba namatti ta’u bantii kutaa 12 matiriikiif galmaa’uurraan han hafe gaaftokko kutaa taa’ee hinbaranne dhugumatti Qaroon akkanaa han argamu darbee darbeeti.matirikiin biyyoolessaa dhufee fudhatee Bantiin wanta ormi yaaduuf dhiisii ofiisaayyuu han hin egne qabxii olaanaadhaan darbe.
Itti ansuun dorggommii iskoolaariif mootummaan yeroo sanaa baasellee dorgomee qabxii gaarii waan fideef carraa biyya bakkee deemanii barachuu argatee barnootasaa universety Kuuba Havanaa dhaqee itti fufe.
wayitta kuubaa turetti Ijaarsa tokkummaa barattoota Oromoo biyyoota dhiyaatti dabalamee waayee rakkoo Oromoo seenaa Oromoof Qabsoo Oromoo sagalee olfudatee lallabeera ijaarameera ijaareera.
Enginer Bantiin branootasaatti jabaa waan tureef Digiriisaa tokkoffaaf lammaffaa achuma unverstii Havanaatti xumuree sadarkaa ulfinaan ebbifame.
Barumsisaa han inni xiyyeeffate waayee Geejiba Galaanarraatti waan tayeef yeroo barnootasaa xumuree biyyatti deebi’e han inni ramadame waajjira buufata Galaan Diimaa YK Asab port turetti ramadame.Buufata sanatti bulchaa tayee sochii Doonii Ethiopia yeroo sanaa hoogganaa ture.
Bantiin hojiisaa jireenya dhuunfaasaa qofaarratti otoo hin hundaayiin Oromoota humna waraanaaf hojjettoota mootummaa turan gurmeessuun dammaqsuun akka isaan qabsoo oromoo bira dhaabbatan deggeran irratti hojii guddaa hojjetaa ture.
Akka kanaan otoo jiruu Mootummaan yeroo sanaa Dargiin humna Qabsaa’ota yeroo sanaatiin mo’amee yeroo angoorraa ariyamu Waraanni Ethiopia yeroo san Asab ture garatti badu dhabee balaa guddaa keessa tureef Doonii ajajasaa jala jiru isaanii ajajee gara Jibuutiitti akka dheessan godhee lubbuun namoota hedduu akka du’arraa baraaraman godheera.
Dhumarratti ofiisaa sababa waraana hin turreef waan sodaatus hin qabneef yeroo waraan Ertryaa Asabiin qabatu inni gara biyyasaa Oromiyaatti deebi’ee Finfinnee gale.
Akkuma Finfinneetti deebi’een Waajjira ABO yeroo sanaatti bakka bu’aa hojii Hawaasaa Oromoo tayee ramadamee hojii qabsoo guddaa hojjeteera .bakka bu’oota dhaaba ABO fi DHDUO Manguddoota walitti fiduun yeroo duraaf akka nagaaf tasgabbiin dhaabbilee oromoo gidduutti ta’u nama shoora guddaa xabatedha.
Ayyaanota yeroo sanatti Oromiyaa bakkoota addaa addaa fk odaa Bulluqi Horrotti Dambii Doollootti Jimmaa Baddalleetti Hawisoo oromoo waliin ta’uun akka Oromoon wal baru qabsoo Bilisummaaf godhamaa jiru cinaa dhaabbatan nama hojjete keessaa Bantiin nama toora duraati.
Teelaa keessa Mootummaan Ce’umsaa jigee gartuun wayyaanee bakka fudhate Bantiin ORA Oromo Relief Association keessatti ramadamee Qabsaa’ota gargaarsa dhabaniif akka gargaaraman warri madaan akka yaalaman itti gaafatama guddaan nama Oromummasaan dirqama fudhatee tajaajiledha. Bakka ajajni barbaachisutti ajajee bakka hojjechuun barbaachisutti hojjetee hoogganedha.barreessaan seenaa gabaabaa kanaa nama dirqama yeroo hedduu irraa fudhatee bobba’eera.
Akkanaan Bantiin namni nagaaf hojjetu namni ilma namaa jaallatu Hayyuun Qaroon Oromiyaaf Oromoof bakka guddaatti egamu ture ALA Mudde 27 1997 warri shira diinatti hirkatanii jiraatan mataa saanii jireenya saaniif malee Oromoof warri hin yaanne yeroof nyaadheen darba warri jedhanii yaadan Bantiitti itti malanii harka Diinaa isa buusanii hamma har’aatti ganna 20oliif bakka buuteensaa dhabamee hafe.
kun Enginer Bantii Guddataaf yoo achiin hafes yoo Waaqni jedhee gales Seenaasaa galmee keenyatti dabalamee taa’uu qabudha.
Bantiin abbaa ilma tokkoofi shamarran sadii ture. Gooti Oromoo kun maatii kana bittimsee harka diinaa bu’e. Ammatti achii buuteen isaa hin beekamiin jira. Seenaa fi gootummaan siaa garuu galmee gootota Oromoo keessatti galmeeffamee barayyuu dhalootaa dhalootatti diroo akka darbu shakkiin hin jiru.
Previous: The missing part of the OLF story
Next: Dr Nagaasoo: Qabsaa’aa Mirga Dhala Namaa